Ciidanka XDS oo deegaanno ka tirsan gobolka Galgaduud ku dilay horjoogaal Al-Shabaab – Radio Muqdisho
Ciidanka XDS oo deegaanno ka tirsan gobolka Galgaduud ku dilay horjoogaal Al-Shabaab
Taliska ciidanka xoogga dalka ee beriga gobolka Galgaduud ayaa sheegay in ciidanku ay dileen horjoogiyaal ka tirsan Al-Shabab kaddib howlgallo ay ka sameeyeen deegaanno ka tirsan gobolkaasi.
Kornel Axmed Maxamed Tereedisho taliyaha ciidanka xoogga dalka ee beriga Galgaduud oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay in horjoogayaal ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab, isagoo xusay in dhawaan ay deegaanka Ceel-qooxle ku dileen nin lagu magacaabi jiray Maxamed Cismaan Waasuge oo ka mid ahaa horjoogayaasha Shabaab.
Taliyaha ayaa intaa ku daray in ciidamada xoogga dalka ay sii joogteyn doonaan howlgallada lagu baacsanayo haraadiga Al-Shabaab, ilaa inta guud ahaan gobolka galgaduud laga cirib tirayo.
Taliyaha ciidanka xoogga dalka ee beriga gobolka Galgaduud Kornel Axmed Maxamed Tereedisho ayaa ugu baaqay dhalinta ay qaldeen maleeshiyaadka Al-shabaab inay isu soo dhiibaan gacanta ciidamada si ay u helaan mustaqbal wanaagsan.
Dowlad goboleedka Koonfurgalbeed oo ciidamo tababbar ugu soo xirtay waajid
Wasiirka Tamarta Soomaaliya oo la kulmay dhiggiisa Turkiga+Sawirro